China 48V500W 12T Isilawuli Ukukhiqiza neFektri | ISITSHALO ESIHLOBENE NO-ANYANISI
Isilawuli se-48V500W 12T
Incazelo Igama Lento: 48V650W 12Tube Isilawuli Ngaphansi kwamandla: 41.5V （± 0.5V） Okwamanje: 31A (± 1A) Usayizi: 26.5 CM * 13.5CM * 5.5CM (Usayizi webhokisi) Ukusetshenziswa: Kokusetshenziswa kwensimbi karisho amaconsi e-ultra-low voltage ahlinzeka ngokusebenza okuphezulu nokusebenza buthule. Ukufakwa okulula nokufaka izintambo ngezixhumi ze-push-on zamasiginali wokulawula namabhasi wethusi aqinile wokuxhuma ukuxhumana kwamandla. Iyahambisana ne-potentiometer enezintambo ezimbili noma i-voltage mpintsha. Iphutha le-mpintsha ...
Igama lento: Isilawuli esingu-48V650W 12Tube
Ngaphansi kwamandla: 41.5V（±0.5V）
Okwamanje: 31A (±1A)
Usayizi: 26.5 I-CM * 13.5CM * 5.5CM (Usayizi webhokisi)
Ukusetshenziswa: Okokuhamba ngezinyawo kukarisho
Ukushintshwa kwemvamisa ephezulu kanye namaconsi e-ultra-low voltage ahlinzeka ngokusebenza okuphezulu nokusebenza buthule.
Ukufakwa okulula nokufaka izintambo ngezixhumi ze-push-on zamasiginali wokulawula namabhasi wethusi aqinile wokuxhuma ukuxhumana kwamandla.
Iyahambisana ne-potentiometer enezintambo ezimbili noma i-voltage mpintsha.
Ukujikeleza kwe-throttle iphutha kukhubaza isilawuli uma izintambo ze-mpintsha zivuleka.
Isici esiphakeme sokukhubaza ukuvimbela ukusebenza kwesilawuli uma ukhiye uvuliwe ngenkathi kusetshenziswa i-throttle.
I-plug braking diode yangaphakathi kusilawuli.
Ukuvikelwa okushisayo kanye nesifunda sesinxephezelo kunikeza umkhawulo wamanje oqhubekayo ngaphezu kwebanga lokusebenza nangesikhathi sokunciphisa ngaphansi / ngaphezulu kokushisa; akukho ukulahleka kwamandla kungazelelwe ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ezishisayo.
Ngaphansi komsebenzi wokusika kwamandla kagesi kuvikela kumandla wamandla webhethri aphansi, kufaka phakathi amandla aphansi abangelwa yimithwalo yangaphandle.
Ihlelwa kalula ngokusebenzisa i-CURTIS Model 1313-4331 Hand-held Programmer noma i-1314 PC Programming Station.
Izindlu ezimangelengele ze-anodized aluminium extruded zihlangabezana nezindinganiso zokufaka uphawu kwemvelo ze-IP65 ukuze zisetshenziswe ezindaweni ezinzima.
Ukupakisha kwe-CKD kugcwele ibhokisi futhi ukupakisha kwe-SKD kuvamise ukupakishwa ngohlaka lwokhuni noma lwensimbi. Uma kunezidingo ezikhethekile, sicela ukhulume nomuntu wethu othengisayo.
Umnyango we-1.R & D: Sineqembu eliqinile le-R & D elinolwazi oluneminyaka eminingi ezindaweni ezifana nogesi, i-electronics, isoftware, imishini, i-automation, njll.
2.Production Center: Isethi egcwele imishini yokucubungula ingaqinisekisa ukunemba; Advanced othomathikhi wire ukushumeka uhlelo ukuqinisekisa ukuvumelana; Umugqa wokukhiqiza ozenzakalelayo uzothuthukisa umkhiqizo.
3.Motor Production: ulayini Semi-othomathikhi ukukhiqizwa umugqa: ezingaphezu kuka-80% ezishintshayo; Amasethi angama-60 ngokushintsha okukodwa; ukukhiqizwa konyaka: 15,000; ubuningi. ukukhiqizwa yonyaka: 45,000 amasethi
4.Controller Production: Semi-othomathikhi umugqa ukukhiqizwa isilawuli: ezingaphezu kuka-80% ezishintshayo; Amayunithi ayi-100 ngokushintsha okukodwa
Ukuphathwa Kwekhwalithi: Umnyango wokuqinisekisa ikhwalithi uzobheka inqubo yokukhiqiza futhi imishini yokuhlola ingavikela ikhwalithi yomkhiqizo.
Langaphambilini Isilawuli se-48V750W 15T
Olandelayo: I-Pedal Rickshaw Motor Kit
Isilawuli se-Scooter Electric
Isilawuli Sejubane Sikagesi
Isilawuli seTricycle kagesi
Isilawuli se-Fast Scooters
Isilawuli seHub Motor
Isilawuli Sejubane se-Scooter
E Ukuhamba ngebhayisikili, I-Light Blue Motorcycle, Mpintsha On Bike, 22.5 Amakhava Amasondo, Side Stand Puck, Ishaja yebhethri ehamba phambili yeLithium Motorcycle,